မင်္ဂလာပွဲ 2022 - အလှဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းများ | Bezzia
မင်္ဂလာပွဲအလှဆင်ခြင်း 2022 တွင် ခေတ်ရေစီးကြောင်းကောင်းများ
Susana godoy | 13/05/2022 16:00 | မင်္ဂလာဆောင်
မင်္ဂလာဆောင် 2022 သည်စတင်နေပြီဖြစ်သည်။ဒါကြောင့် အလှဆင်မှုမှာ ကြီးကြီးမားမား ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ သိထားရမယ်။ သေချာပေါက်နီးပါး သူတို့က မင်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက် စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ ဆက်တိုက်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့။ ၎င်းတို့သည် ခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပြီး ၎င်းတို့သည် များစွာပြောဆိုနိုင်စေမည့် ရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် မင်းရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်မှာ အဲဒါတွေအားလုံးကို လိုချင်ရင် အဲဒါတွေနဲ့ ဆုံဖို့က မကူညီနိုင်ဘူး။ မင်္ဂလာပွဲ ပတ်ပတ်လည်မှာ အရာအားလုံးဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်တာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဤခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို စိတ်ကူးစိတ်သန်းအဖြစ် ခံယူပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အရသာနှင့်အညီ မင်္ဂလာဆောင်တွင် ထည့်သွင်းပါ။. သင့်အတွက် အရေးကြီးဆုံးနေ့အတွက် သင်စိတ်ကူးထားသည့်အရာများနှင့် ၎င်းတို့ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမှာ သေချာပါတယ်။
1 မင်္ဂလာပွဲများအတွက် 2022 အလင်းနှင့် သဘာဝအရောင်များ
2 တွဲလောင်း မီးချောင်းများဖြင့် အလင်းရောင်ကို သယ်ဆောင်သွားပါသည်။
3 မင်္ဂလာပွဲအလှဆင်ခြင်း 2022 တွင် ပေါင်းစပ်စားပွဲများ
4 ဧည့်သည်များကို မူရင်းနည်းအတိုင်း စည်းရုံးပါ။
မင်္ဂလာပွဲများအတွက် 2022 အလင်းနှင့် သဘာဝအရောင်များ
အရောင်များ၏ ဆောင်ပုဒ်သည် အမြဲတမ်း ထင်မြင်ချက်အများဆုံးထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤကိစ္စတွင် ကြားနေသံများကို ကတိကဝတ် အားကောင်းလာပုံရသည်။ ထို့ကြောင့် ရွေးချယ်စရာ palette တွင် အဖြူရောင်နှင့် အဝါနုရောင် နှင့် ပေါ့ပါးသော အရိပ်များကို ပေါင်းထည့်ပါမည်။. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်အောင်မြင်ချင်တဲ့အရာက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဝန်းရံထားတဲ့ သဘာဝနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ပိုပြီး သဘာဝကျတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ပိုမိုမျှတသောနေရာများရရှိစေရန် အထူးခြားဆုံးအရောင်များကို ချန်ထားခဲ့ပါမည်။ တက်ကြွသောအရောင်အသွေးအချို့ကိုထည့်လိုပါက၊ သင့်အရသာအရ ၎င်းကို အမြဲလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်ကို သင်သိပါသည်။
တွဲလောင်း မီးချောင်းများဖြင့် အလင်းရောင်ကို သယ်ဆောင်သွားပါသည်။
မင်္ဂလာပွဲ အလှဆင်ရာမှာ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မီးအလင်းရောင်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ပွဲကြီး မှာ ပိုပြီး ထင်ရှား အောင် လုပ် နိုင် လို့ ပါ ။ သဘာဝအတိုင်း ပြီးဆုံးခြင်းနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ တွဲလောင်းမီးအိမ်များသည် တကယ့်ဇာတ်ဆောင်များ ဖြစ်လိမ့်မည်။. ဒါပေမယ့် အရမ်းတောက်ပနေမှာမဟုတ်ပေမယ့် အကြော့ဆုံးအချောထည်ဖြစ်စေမယ့် ဖန်သားပြင်တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဖယောင်းတိုင်တွေဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်များထဲက တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ ပြဿနာမရှိစေရန်၊ အလှဆင်ခြင်းကို ပိုမိုခေတ်မီသောလေကို ရရှိစေမည့် ဖန်ပန်းအိုးများအတွင်း၌ ထားနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပွဲအလှဆင်ခြင်း 2022 တွင် ပေါင်းစပ်စားပွဲများ
အခု နှစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ သူတို့ဟာ ပရိုတိုကောနဲ့ ကွဲချင်နေကြတယ်။ သတို့သမီးနဲ့ သတို့သားနဲ့ အမြဲတမ်း ကွဲကွာနေတဲ့ စားပွဲရှည်တွေ ရှိတာက ကိစ္စတော်တော်များများမှာ အမြဲတမ်း သဘောကျနေမယ့် အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် စားပွဲရှည်နှင့် အဝိုင်း နှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ဒါ့ပြင် အခုအချိန်အတော်ကြာအောင် လုပ်ဆောင်နေပြီး ဆက်ပြီးအောင်မြင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အစုံ၊ သတို့သမီး နဲ့ သတို့သား က ဘိုးဘွား တွေ နဲ့ အမြဲ ထိုင်လေ့ မရှိ ပေမယ့် စားပွဲ မှာ တစ်ယောက်တည်း ရှိနေ တာကို တွေ့ တိုင်း၊ ဒါပေမယ့် ဧည့်သည်တွေနဲ့ ပိုနီးစပ်တယ်၊ စုံတွဲတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးကို သင်အမြဲရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့သော် ပရိုတိုကောများကို ဘေးဖယ်ထားပုံရသည်မှာ မှန်ပါသည်။
ဧည့်သည်များကို မူရင်းနည်းအတိုင်း စည်းရုံးပါ။
နံပါတ်များပါသော စားပွဲများ မရှိတော့ဘဲ ၎င်းတို့ တစ်ခုစီတွင် ဧည့်သည်များစွာ စုဝေးနေပါသည်။ ကောင်းပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားတဲ့ မင်္ဂလာပွဲတိုင်းမှာ မူရင်းသဘောက နေရာယူထားတယ်။ ထို့ကြောင့် ဤနံပါတ်များအစား သင်အမြဲတမ်း ၎င်းတို့ကို ထည့်နိုင်သည်။ ဇယားတစ်ခုစီတွင် သီချင်းများ သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်များ၏ ခေါင်းစဉ်များနှင့် သရုပ်ဆောင်များ၏ အမည်များကိုပင် ထည့်သွင်းထားသည်။. စိတ်ကူးကို မူလပုံစံအတိုင်း ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နေသရွေ့ ဘာမဆို ဖြစ်သွားမှာပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်တွင်ရှိနေပြီး စိတ်ကူးစိတ်သန်းအနည်းငယ်ဖြင့် ၎င်းတို့သည် အောင်မြင်သည်ထက် ပိုမိုအောင်မြင်နိုင်သည်ဟု ထင်ရသည်။ ထိုနည်းအတူ၊ သင်သည် စာရင်းတစ်ခုလုံးကို အမည်များဖြင့် ထုတ်ဝေသည့်နေရာတွင် ဖော့ဘူးကို အမြဲထားနိုင်သည် သို့မဟုတ်၊ စားပွဲတစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏အမည်ကို သတ်မှတ်သည့်အသေးစိတ်အချက်အချို့ကို ထားရှိနိုင်သည်။ အကြံကောင်းတစ်ခုလို မဟုတ်ဘူးလား။ ထို့နောက် မင်္ဂလာဆောင်အလှဆင်ခြင်း 2022 တွင် သင်သွားနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » မင်္ဂလာဆောင် » မင်္ဂလာပွဲအလှဆင်ခြင်း 2022 တွင် ခေတ်ရေစီးကြောင်းကောင်းများ
မင်းရဲ့ဟင်းလင်းပြင် ဒါမှမဟုတ် ဥယျာဉ်ကို နွေးထွေးမှုပေးဖို့ ပြင်ပမီးတွင်းတွေ